Burma Partnership » ASEAN Youth Forum Strongly Condemns Brutality and Violence Taken Against Students Protest in Myanmar!!!
By The ASEAN Youth Forum • March 13, 2015
လူ့ အခွင့်အရေးသည် အလျှော့အတင်းမရှိ။ ရက်စက်အကြမ်းဖက်မှုသည် အဖြေမဟုတ်။
၂၀၁၅ မတ်လ ၁၁
မြန်မာနိုင်ငံမှ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများအပေါ် ရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက်မှုကို အာဆီယံ လူငယ်ဖိုရမ် မှ ပြင်းထန်စွာ ကန့် ကွက်ရှုံ့ ချသည်။
ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အဆုံးသတ်မရှိ ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ ရုန်းကန်ခဲ့သော မြန်မာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တို့ သည် ရန်ကုန်နှင့်လက်ပံတို့ တွင် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်တို့ ဧ။် ရက်စက်လှသော အကြမ်းဖက် မှုဖြင့် ဖြိုခွင်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုသည် ပညာရေး အသုံးစရိတ်ချထားမှု လိုအပ်ချက်များ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုများသော ပညာရေးစနစ်၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့် ကို ချိုးနှိမ်မှု၊ လူထုစုဝေးညှိနှိုင်းမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိသော အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေ ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသော ကျောင်းသားများ အပေါ်တွင်သာမက ကျောင်းသားသပိတ်ကို ထောက်ခံဝန်းရံလျက်ရှိသော ဒေသခံပြည်သူများ၊ သံဃာတော်များ၊ နှင့် အခြားသူများ အပေါ်တွင်ပါ သက်ရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ စက်တင်ဘာလတွင် လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုခဲ့သည့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြမှုများသည်၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ဥပဒေတွင် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရန် ကျောင်းသားများ ၏ တောင်းဆိုချက် ၁၁ ချက် ဖြင့် မန္တလေးမှ ရန်ကုန်သို့ လမ်းလျှောက်ချီတတ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ တောင်းဆိုချက်များတွင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးရန်၊ တက္ကသိုလ်များ ၏ ကိုယ်ပိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့် ရရှိရန်၊ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် မိခင်ဘာသာစကားအသုံးပြု သင်ကြားရန်၊ ပညာရေးအတွက် အမျိုးသားအသုံးစရိတ်ချထားမှုကို ၂၀ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ပေးရန် စသည့် အချက်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဆန္ဒပြမှုများကို ယနေ့ အချိန်ထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုသိရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ကျောင်းသားများ၏ တောင်းဆိုချက်များကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ တောင်းဆိုချက် နောက်ဆုံးရက်အထိ ပညာရေး ဥပဒေတွင် ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ လက်ပံတန်းတွင် ရောက်ရှိနေသော ရန်ကုန်သို့ချီတတ်လာသည့်ကျောင်းသားများအား ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ခုတွင် ရန်ကုန်သို့ဆက်လက် မချီတက်နိုင်ရန် ပိတ်ဆို့ ခံထားခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတွင်းအခြားသော တိုင်း၊ဒေသကြီးများမှ ကျောင်းသားများသည် လည်း အဆိုပါ ဆန္ဒပြမှုကို အားပေးထောက်ခံသည့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းစည်းမှုအား ပြသခဲ့ကြသည်။
မတ်လ ၅ ရက်နေ့ တွင် ပြုလုပ်သော မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ ရှိ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ မှုကို ရဲ များမှ အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြသူ ၈ဦး အဖမ်းခံရသည့်အပြင် လူများစွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ကြသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် လက်ပံတန်းဒေသတွင် ဆန္ဒပြမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြသူ ၅ဦး ကို လည်း ရဲများမှ ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသည်။ ၄င်းဆန္ဒပြသူ ၅ဦး အား ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်သို့ ချီတက်ခွင့်ပေးပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့ များမှ လက်နက်မဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသော ကျောင်းသားများကို ရက်စက်စွာ ဖြိုခွဲဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရ ကျောင်းသားများ၊ သံဃာတော်များနှင့် လက်ပံတန်း ဒေသခံများကို ရဲများမှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးပါ။
နေပြည်တော်တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော အာဆီယံ၁၀ နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သော အာဆီယံ လူငယ် ဖိုရမ် မှ လူငယ်များအနေဖြင့် အရှေ့တောင် အာရှ လူငယ်များအား အပေါ် မည်သည့် အကြမ်းဖက်မှု ကိုမဆို ရှုတ်ချပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘ၀ ဧ။် အရည်အသွေးများသည် အာဏာ ရှိပြီး လက်တွေ့ ကျင့်သုံးနေခြင်းအပေါ်တွင် လွန်စွာ မူတည်နေပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ကို ပြုလုပ်လိုသော စိတ်သဘော နှင့် ဒီမို ကရေစီ လမ်းစဉ်ပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းများ ကို ခွင့်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့ သည် အာဆီယံဒေသတွင်း ယခုလက်ရှိနှင့် နောင် အနာဂတ်ဧ။် ခေါင်းဆောင်များ အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ ဧ။် လိုအပ်ချက်များ၊ လိုချင်မှုများ နှင့် အခွင့်အရေးများကို ကောင်းစွာ သိရှိ ထားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ရှိသော လူငယ်များနှင့် အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ ကို လေးစားရမည်။ သူတို့ ဧ။် အခွင့်အရေးများကို ဖွင့်ဟပြောဆိုနိုင်ရပါမည်။ ထို့ အတူ သူတို့ ဧ။် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် နိုင်ငံများအတွက် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရရှိရန် အားထုတ်သည့်နေရာတွင် လည်း ပါဝင်ခွင့်ရှိရပါမည်။ ပြောင်းလဲမှုသည် ယခုပင် ဖြစ်ပေါ်ရမည်။
မြန်မာ အစိုးရ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
– ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် အခြားပြည်သူများအပေါ် စွဲချက်တင်ထားသည်များ ပယ်ဖျက်ပေးရန်။
– ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရသူများ အားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ ချက်ခြင်းပြန်လွှတ်ပေးရန်။
– လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ အပေါ် ရက်စက်စွာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်း မှုများ ရပ်တန့် ရန်။
– မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ တွင် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုများ ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး အပြည့်အ၀ တာဝန်ယူသွားရန်။
– အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပြီး ကောင်းမွန် ထိရောက်သော ပညာရေးမူဝါဒ အတွက်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာရန် အကောင်အထည်ဖော်ပေးရန်။
– ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ကျောင်းသားကျောင်းသူများတောင်းဆိုနေချက်များ နှင့်အတူ နှောင့်နှေးကြန့် ကြာမှုမရှိဘဲ အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်ရန်။
RIGHTS ARE NON-NEGOTIABLE! BRUTALITY IS NOT THE ANSWER!
VIOLENCE HAS TO STOP!
The endless and painful struggle of Myanmar students for education reform has resulted to violence and brutality of the police in Yangon and Letpadan. The assault involved everyone who joined the student protest, including monks, local residents, those who raised their voice peacefully against National Education Law, which lack of transparency through public consultation, endangers the academic freedom and centralized power over the education system that leads the improper national budget allocation for education.
The protest started in January 2015 when hundreds of students marched from Mandalay to Yangon to amend eleven points found in the National Education Law, passed by the Myanmar Parliament in September 2014. Their demands include the freedom of student unions establishment, greater autonomy for universities, local language teaching in ethnic areas and 20% national budget allocation for education. This protests continued up to this day. The Government failed to listen to the demands on February by not amending the law on 28 February. Students group in Letpadan were blocked inamonastery to prevent their march to Yangon. The solidarity from other students in the country was instantly raised to support this cause by holding peaceful protests.
The peaceful protest on March5in front of Yangon City Hall was violently attacked by the police. Many were injured, while eight protesters were unlawfully arrested. The next day in Letpadan, protest continues and five protesters arrested by the police. These protesters have been released.
On March 10, after the protesters in Letpadan were allowed to go to Yangon, police and some groups of vigilante surrounded the peaceful and unarmed protesters and then brutally attacked them. Some injured students, monks and residents of Letpadan in this demonstration were taken away by the police. Until now, the detained protesters have not been released.
ASEAN Youth Forum, who have met the 10 leaders, led by President Thein Sein, in Nay Pyi Taw, is greatly concerned and condemns any form of brutality and violence against all young Southeast Asians. The Quality of our lives greatly depends on institutions that have the power and will to make reforms and allow democratic processes to work. As both present and future leaders of these region, we are very aware of our needs, wants and rights. Young people and civil societies in Myanmar have to be respected, be given their space, be able to claim their rights and be included in efforts to enhance their societies and nations. CHANGE HAS TO HAPPEN. NOW.
We strongly demand the Myanmar government and concerned institutions/agencies to take action and full responsibility to :
– Drop all charges against the arrested students and protesters
– Immediately release all protesters in detention
– Stop the using of violence and brutality for peaceful and unarmed demonstration
– Investigate and hold all actors responsible for the violence against the protesters on March 10 demonstration
– Build meaningful dialogue and consultative process with the students for the most inclusive and effective way to formulate education policy
– Amend the National Education Law without any delay in line with students’ demands to ensure educational reforms that address the needs and concerns of the stakeholders.
We ask everyone to support our call for change. Please endorse this Statement and share it to your networks and colleagues. Thank you and let’s all be vigilant, for human rights, for change, for freedom, for every person in Myanmar.
Tags: Letpadan, National Education Law, Peaceful Assembly and Procession Law, Peaceful Protest, The ASEAN Youth Forum